फेरि लकडाउन गर्ने देउबा सरकारको तयारी - हातेमालो डेली
फेरि लकडाउन गर्ने देउबा सरकारको तयारी
काठमाडौँ । देउवा सरकारले स्मार्ट लकडाउनको तयारी गरेको छ। कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले शुक्रबारको निर्देशक समितिको बैठकमा स्मार्ट लकडाउन प्रस्ताव गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षता निर्देशक समिति बैठक बसेको थियो।‘जहाँ संक्रमण बढी छ, सम्बन्धित जिल्ला वा स्थानीय तहले नै लकडाउन गर्न सक्ने अवधारणाको प्रस्ताव सीसीएमसीले गरेको छ’, सीसीएमसीका प्रवक्ता नुरहरि खतिवडाले भने। वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुने गरी लकडाउन गर्ने अवधारणा नै स्मार्ट लकडाउन रहेको उनले स्पष्ट पारे।
अहिलेसम्म हुँदै आएका लकडाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नै गर्दै आएको भए पनि केन्द्रको नियन्त्रण रहँदै आएको छ। अब हुने लकडाउनमा जिल्लाले स्वयं अवस्था हेरेर निर्णय गर्न सक्छ। स्मार्ट लकडाउनको अवधारणाअनुसार जहाँ कोरोना संक्रमण बढ्छ, त्यहाँ लकडाउन हुन्छ, जहाँ घट्छ, खुला हुँदै जान्छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बालबालिकाहरूका लागि भेन्टिलेटरसहितका आईसीयू बेड थप्ने कार्य अगाडि बढेको जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बालबालिकाहरूका लागि १८० भेन्टिलेटरसहित २५० बेड आईसीयू थप्ने जानकारी दिए ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको तेस्रो लहर सुरु हुनसक्ने भन्दै कोरोना उपचार भइरहेका अस्पताललाई बालबालिकाहरूका लागि छुट्टै २० प्रतिशत बेड तयारी अवस्थामा राख्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ । डा. पौडेलले देशभर हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू) बेड पनि विस्तार गर्न लागेको जानकारी दिए ।
उनले देशभर थप एक हजार चार सय एचडीयू बेड विस्तार गर्न लागिएको बताए । हाल देशभरका सरकारी अस्पतालहरूमा दुई हजार ७५ र निजी क्षेत्रका अस्पतालमा ७७८ एचडीयू बेड सञ्चालनमा रहेका छन् ।पौडेलले भेन्टिलेटरहरूको सङ्ख्या ९०४ पु¥याइएको र १८० थप्न लागिएको जानकारी दिए । कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा अत्यावश्यक पर्ने मेडिकल अक्सिजनको आपूर्ति सुदृढ गर्नका लागि सरकारले पाँच हजार पाँच सय अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ल्याइसकेको जानकारी दिए ।
यस्तै तीन हजार पाँच सय अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर आउने क्रममा रहेको जानकारी गराए । डा. पौडेलले छ हजार ३७७ अक्सिजन सिलिन्डर थप गरिएको बताए । यस्तै १९ वटा अक्सिजन प्लान्ट, २७ वटा अक्सिजन ट्याङ्क थप गर्ने योजनाअन्तर्गत दुईवटाको कार्य सम्पन्न गरिएको बताए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।पाकिस्तानले गत वर्ष कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लगाएको लकडाउन थेग्न नसक्ने अवस्थमा पुगेपछि स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा ल्याएको थियो । विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मानिसलाई चरम गरिबीबाट बचाउन पाकिस्तानले यस्तो लकडाउनको अभ्यास गरेको थियो ।
पाकिस्तानले ‘स्मार्ट लकडाउन’लाई कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि ल्याइएको महत्वपूर्ण विधि भनेको छ । सुरक्षा निकायसँगको सहकार्यमा मानिसहरुलाई ट्र्याकिङ, ट्रेसिङ, परीक्षण र क्वारेन्टिनमा राख्नका लागि यस किसिमको लकडाउनको अवधारणा ल्याइएको थियो । यो योजनाअनुसार सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइन्छ । तर, अन्य क्षेत्रमा लगाइएको लकडाउन भने कायमै रहन्छ ।
Previous articleटोकियो ओलम्पिक खेलकुदमा चीन ४० पदकसहित शीर्ष स्थानमा
Next articleअन्तत कसरी झुके माधब नेपाल , एस्तो घोषणा